Tag: gburugburu ebe obibi | Martech Zone
Tag: agbakwunyere gburugburu
Fraịdee, Nọvemba 13, 2020 Fraịdee, Nọvemba 13, 2020 Tim Beveridge
Nchegbu nzuzo nke taa na-arịwanye elu, yana ọnwụ kuki, pụtara na ndị na-ere ahịa ugbu a kwesịrị ịnapụta mkpọsa ahaziri iche karị, n'oge na n'ọtụtụ. Nke ka mkpa bụ na ha kwesiri igosipụta ọmịiko ma gosi ozi ha na gburugburu nchekwa. Nke a bụ ebe ike ịchebara ihe gbasara ọnọdụ na-abata. Ebumnuche gburugburu bụ ụzọ iji lebara ndị na-ege ntị anya site na iji isiokwu na isiokwu sitere na ọdịnaya dị na ngwakọ ahịa, nke anaghị achọ kuki ma ọ bụ ihe ọzọ.
Fraịdee, Nọvemba 6, 2020 Fraịdee, Nọvemba 6, 2020 Tim Beveridge
Anyị na-ebi na ngbanwe zuru ụwa ọnụ, ebe nchegbu nzuzo, yana ọnwụ kuki, na-etinye nrụgide na ndị na-ere ahịa ka ha wepụta mkpọsa ahaziri iche na nke ọmịiko, na gburugburu nchekwa-nchekwa. Ọ bụ ezie na nke a na-eweta ọtụtụ nsogbu, ọ na-ewetakwa ọtụtụ ohere maka ndị ahịa iji kpọghee usoro ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi. Na-akwadebe Maka Kuki-obere Ọdịnihu Onye na-azụ ahịa nzuzo na-ajụzi kuki ndị ọzọ, na akụkọ 2018 na-ekpughe 64% nke kuki jụrụ, ma